UNESCO waxay ku hanjabtay inay Stonehenge ka xayuubineyso meeqaamkii uu lahaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » UNESCO waxay ku hanjabtay inay Stonehenge ka xayuubineyso meeqaamkii uu lahaa
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Parks Theme • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Dhismaha wadada weyn ee dhulka hoostiisa awgeed, Stonehenge wuxuu heli doonaa xaaladda shay qatar ku jira, taas oo ay ku xigi doonto ka reebista liiska dhaxalka dhaqanka.
Dhismaha waddadu wuxuu halis ku yahay xaaladda Dhaxalka Dunida ee Stonehenge.
Mashruuca marinka dhulka hoostiisa mara ayaa la ansixiyay bishii Nofeembar ee sanadkii hore.
Jidku wuxuu dhererkiisu noqon doonaa ku dhowaad 3 kiilomitir.
Stonehenge ayaa laga yaabaa inay lumiso maqaamkeeda ah inay tahay Goob Dhaxal Adduunka ah sababo la xiriira dhismaha tuneel ka hooseeya astaanta, sida ay sheegayaan warbixinnadii ugu dambeeyay.
The Ururka Qaramada Midoobay ee Waxbarshada, Sayniska iyo Dhaqanka (UNESCO) ayaa uga digtay maamulka Ingiriiska dhismaha dariiqa weyn ee dhulka hoostiisa, Stonehenge heli doonaa xaaladda shay khatar ku jira. Tanna waxaa ku xigi doonta in laga reebo liiska hiddaha iyo dhaqanka.
Mashruuca marinka dhulka hoostiisa ah waxaa ansixiyay Wasaaradda Gaadiidka ee Ingiriiska bishii Nofeembar ee sanadkii hore. Waxaa loogu talagalay in lagu fududeeyo culeyska taraafikada ee wadada weyn ee A303. Jidku wuxuu dhererkiisu noqon doonaa ku dhowaad 3 kiilomitir.
Stonehenge waa taallo taariikhi ah oo ku taal Salisbury Plain ee Wiltshire, England, laba mayl galbeedka Amesbury. Waxay ka kooban tahay giraan banaanka ah ee dhagaxa taagan ee sarsen taagan, mid walbana qiyaastiisu tahay 13 fuudh, 25 dhudhun oo ballac ah, culeyskiisuna yahay XNUMX tan, oo ay kor u kacayso isku xidhka dhagxaanta safka hoose.
Gudaha gudihiisa waa giraan ka kooban bluestones ka yar. Gudaha kuwan waxaa ka mid ah trilithons-taagan, laba qaybood oo waaweyn oo Sarsens ah oo ku soo biiray hal dabaq. Taallada oo dhan, oo hadda burbursan, waxay u jihaysan tahay qorrax ka soo baxa xagaaga xagaaga. Dhagxaanta waxaa lagu dejinayaa shaqooyinka dhulka ee bartamaha dhismaha ugu cufan ee taalladaha Neolithic iyo Bronze Age ee England, oo ay ku jiraan dhowr boqol oo tumuli (aaso aasid ah).
Arkeologists waxay aaminsan yihiin in la dhisay laga bilaabo 3000 BC ilaa 2000 BC. Bangiga dhulka ku wareegsan ee ku wareegsan iyo godka, oo ka kooban wajigii ugu horreeyay ee taallada, waxaa lagu taariikheeyay illaa 3100 BC. Shukaansiga Radiocarbon wuxuu soo jeedinayaa in bluestones-kii ugu horreeyay la kiciyey intii u dhaxeysay 2400 iyo 2200 BC, in kasta oo laga yaabo inay goobta joogeen horaantii 3000 BC.
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Boqortooyada Ingiriiska, Stonehenge waxaa loo tixgeliyaa inay tahay astaan ​​dhaqameed Ingiriis. Waxay ahayd mid sharci ahaan loo ilaaliyo Jadwalka Qadiimiga ah ee Jadwalka laga soo bilaabo 1882, markii sharci lagu ilaalinayo dhismayaasha taariikhiga ah markii ugu horreysay si guul leh looga hirgeliyay Ingiriiska. Goobta iyo hareeraheeda waxaa lagu daray liiska UNESCO ee Goobaha Dhaxalka Adduunka 1986. Stonehenge waxaa iska leh Crown oo ay maamusho Heritage Ingriiska; dhulka ku xeeran waxaa iska leh Hay'adda Qaranka.